Optimizing Email Design to Capture the Attention of Your Reader |. Na-echekwa Email Design iji weghara Ntị nke Onye Na-agụ Gị | Martech Zone
Ọnwa ole na ole gara aga na ogbako, m na-ele ihe ngosi na-adọrọ mmasị na usoro nke onye na-agụ email na-ewere ka ha na-abanye n'ime email ha. Ọ bụghị ụzọ ọtụtụ mmadụ kwenyere na ọ na-arụ ọrụ dị iche na weebụsaịtị. Mgbe ị na-elele email, ị na-ahụkarị mkpụrụ okwu izizi nke ahịrị isiokwu ya na ikekwe nlele dị mkpirikpi nke ọdịnaya dị na ya. Mgbe ụfọdụ, nke ahụ bụ ebe onye debanyere aha ya na-akwụsị. Ma ọ bụ, ha nwere ike pịa email ma mepee ya - na-ekpughe akụkụ kachasị nke email ahụ a na-ahụ anya na onye ahịa email ha. Na mgbe ahụ, ọ bụrụ na e jidere uche ha, ha nwere ike ịpịgharịa ala. Maka ụfọdụ ndị ahịa, enwere usoro dị n'etiti ma ha chọrọ ile ihe oyiyi ahụ ma ọ bụ na ha achọghị - mana ekwenyere m na omume na-aga nwayọ.
a infographic si Emma na-ejegharị site na ụfọdụ nkọwa dị mkpa nke ozi email nke na-eme ka onye na-agụ ya ịmata ihe dị omimi na njikọ aka. Inweta mmetụta, itinye ndị mmadụ na onyonyo, ilekwasị anya na agba na ebe ọcha iji mee ka anya ghara ịdị na-eme ihe… enwere ike itinye ihe ndị a niile iji mepee mepee ma pịa ndị debanyere aha gị.
Enwere m mmasị na njedebe mmechi ha na agba, agbanyeghị, m ga-etinye ya na nke ọ bụla n'ime ihe nzuzo 12!
Ndị na-ege ntị ọ bụla dị iche, yabụ ọ dị mkpa ịgba ọsọ ole na ole iji chọpụta…
Anyị ahụla ụfọdụ nsonaazụ dị egwu na ozi-e ogologo ederede nke na-enweghị ọtụtụ nkọwa, yana ozi ịntanetị ndị ọzọ bụ naanị otu nnukwu onyonyo nyefere na njikọ. Ọ dabere na ndị na-ege gị ntị, ọkwa uche ha, atụmanya ha na ịnweta email gị, yana ụdị usoro ọrụ ha nọ na ya. Ikekwe ha chọrọ ịgụ ogologo nkọwa nke onyinye gị, ma ọ bụ na ha dị njikere ịpị bọtịnụ ma debanye aha. Won't gaghị ama ọ gwụla ma ị nwaa njikọ dị iche iche. Ya ejula gi anya ma o buru na o bughi otu uzo i choro ime. Ọtụtụ oge ị ga - achọta nsonaazụ kacha mma site na ịkesa ma nwalee ọdịiche dị iche iche n'etiti ndị debanyere aha gị.
Tags: anyaemail imeweozi infographicEmmaụbụrụ mmadụemmamyemmaPsychology